महिलाहरु किन अ’परिचित पु’रुषसंग उ’त्तेजि’त हु’न्छन् , थाहा पाउनुहोस ! – Krazy NepaL
महिलाहरु किन अ’परिचित पु’रुषसंग उ’त्तेजि’त हु’न्छन् , थाहा पाउनुहोस !
February 12, 2021 610
ऐजेन्सी ।शा’रिरक स’म्बन्धलाई राम्रो विचारले सोचे राम्रै हुन्छ । न’राम्रो विचारले सोचे न’राम्रो हुन्छ जब शा’रिरक स’म्बन्धलाई न’राम्रो बि’चारले हेर्ने गरिन्छ । तब शा’रिरक स’म्बन्ध ज’तिको घृ’णित कुरा केहि न’हुने अध्ययनहरुले देखाउँदै आएका छन् । यस बिषयमा भन्नु पर्दा ना’रीहरु ल’जालु र जा’ली पनि हुने गर्दछन् भन्ने निष्कर्ष अध्यनहरुले बताएका छन् ।
प्राय स्त्रीले आफ्नो जीवनमा विभिन्न खालको शा’रिरक स’म्बन्ध फरक ढाँचा ,फरक विचार ,कसैको द’वाब बि’ना स्वत्रन्त्र पूर्वक अ’नुभव गर्न चाहने गरेको दा’वी गर्दै प्रतिवेदन बाहिर आएको हो । फु’र्सद मिल्दा विभिन्न प्रकारका शा’रिरक स’म्बन्ध प’रीक्षण समेत गर्न म’न पराउने उल्लेख गरेका छन् ।
अध्ययनले प्रायस् जसो महिला अपरिचित पु’रुषसंग शा’रिरक स’म्बन्ध रा’ख्न मन प’राउछन र उ’त्तेजित हु’न्छन कि’नभने अ’पिरिचि’तसँग शा’रिरक स’म्बन्ध रा’ख्दा सबै सि’माहरु भु’लेर र’माइलो गर्न पाइन्छ भन्ने सोचाई हुन्छ ।
तर कतिपय अवस्थामा पु’रुषहरुले छु’दा रि’स उठ्ने, न’राम्रो लाग्ने हुन्छ।
Prevआज माघ ३० गते शुक्रवार निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
Nextकस्तो पुरुष संग बढी रुचि राख्छन् महिलाहरु ( जान्नुहोस् )
आज २७ बैशाख २०७८ सोमवारको राशिफल निकै राम्रो छ हेर्नुहोस्
असार १४ गतेदेखि वेपत्ता भएकी विना सापकोटाबारे आयो यस्तो अपडेट, राति ८ बजेर ४१ मिनेटमा…
जन्मदेखि नै भाग्यमानी हुन्छन् यी ३ राशीका व्यक्ति, हेर्नुहोस् तपाईंको राशी कुन ?
“केपी ओली दलाल नोकरशाहा, पुजीबादी चिन्तन रहेको खोक्रो कम्युनिस्ट हुन् :प्रचण्ड”
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45444)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (24048)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18605)